Bhutan: Fampakarambadin’ny Mpanjaka Nanome Mpanjakavavy Ho An’ny Firenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2011 6:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Ελληνικά, English
Nahazo fanomezana avy amin'ny mpanjaka ny fanjakana kiritika Himalayana ao Bhutan – Mpanjakavavy vaovao, Ashi Jetsun Pema, 21 taona. Tamin'ny faha-13 Oktobra, ny Mpanjakalahy Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 31 taona, dia nampakatra sy nampisalotra azy ny satroboninahitra nandritra ny lanonana tsotra sy natao ho an'ireo tapaka aman-tsakaiza tao amin'ny Punakha Dzong, Lapa voaaro mànda niorina efa hatrany amin'ny taonjato faha-16.
Fotoan-danonana iray efa nandrasan'ny Bhutanese izy io izay efa nanomboka nanontany tena hoe rahoviana no mba hanambady ity Mpanjakany tokantena efa 31 taona ity, fantatra eran'ny Azia Atsimo manontolo amin'ny endrika mevany sy ny hatsaran-toetrany.
Nipoapoaka tokoa tao amin'ny Twitter ny fientanentanan-dry zareo Bhutanese ka hatrany anaty Facebook sy ireo sehatry ny fampahalalam-baovao sosialy isankarazany ahitàna olona mandefa ny fankasitrahany, ny firariantsoany sy ireo sarin'ny mpanjaka mivady- eny fa hatramin'ny fanovan'ny sasany ny sariny ho ny an'izy mivady mpanjaka aza.
Tshering Tashi, mpianatra iray ao amin'ny kilasy XI ao amin'ny Punakha HSS, dia nanoratra ny fankasitrahany toy ity tao amin'ny lahatsoratra nampiantranoin'ny tranonkala Rikku Dhan Subba:
Ny fotoana nahenoako ny vaovao,
nalalahako ny foko, ary nofenoiko hafaliana,
Satria tsy vitako ny tsy ho safononoka,
Satria tsy vitako ny tsy hahatsapa firavoravoana.
Izy mivady Mpanjakan'i Bhutan. Sary avy amin'ny Fifandraisana amin'ny Media eo anivon"ny Fanjakana. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Nandritra ny herinandro nitondra nankany amin'ilay lanonambe dia nisy horohorontany mahery vaika nahatratra 6.9 tamin'ny maridrefy richter tamin'ny faha-18 Septambra, namela takaitra goavana tamin'ireo monastera tranainy marobe sy trano fonenana manodidina ny 1200 teo ho eo nanerana ny firenena. Nanomboka tamin'io andro io ka hatramin'ny efatra andro nialoha ny fampakarambady, ny Mpanjakalahy sy ny fofombadiny dia nitety ny firenena mba hizaha ireo fahavoazana sy hanome tokim-panohanana ho an'ny vahoaka.
Ny Tomponandraikitra Ofisialin'ny Fifandraisana amin'ny Media ao an-dapa, Dorji Wangchuk, izay tao an-tanànan'i Samchi any amin'ny faritra atsimon'i Bhutan manara-dia ny Mpanjaka, dia nibitsika hoe :
@Dorji_Wangchuk: Tsy mampino hoe hisy fampakarambadin'ny mpanjaka afaka andro vitsy monja. Ary dia mbola tsy any Thimphu akory aza izahay.
Avy eo, roa andro monja nialoha ny fampakarambady, taorian'ny nahatongavan'ireo mpanao gazety vahiny maherin'ny 150 tao amin'ilay renivohitra bitika, dia ity ny bitsika iray faharoa avy aminy:
@Dorji_Wangchuk: Mpanao gazety vahiny iray hafa no niantso ahy. “Eh, tena tsy misy na inona na inona mitranga eto izany an. andro 2 monja dia fampakarambadin'ny mpanjaka!” “Tongasoa eto Bhutan” hoy aho mantsy azy.
Eo amin'ny samy Bhutanese dia efa fantatra fa izahay dia manampahaizana amin'ny fanomanan-javatra amin'ny minitra farany, eny fa na dia ho amin'ny fampakarambadin'ny Mpanjaka aza.
Ary tsy nivaona, toy izay indray no nataon-dry zareo tamin'ity. Ilay fampakarambady, izay nalefan'ny fahitalavi-pirenena ao Bhutan BBS (Bhutan Broadcasting Corporation) nivantana, dia lanonana mendrika atrehana. Ho an'ireo maro tsy afaka nankany Punakha na Bhutan, na dia tsy dia nanome rariny loatra an'ilay lanonambe aza ny faharatsian'ny fampitàna mivantana, dia mba nahafahana ihany nigoka sy nahatsapa ny fientanentanana ho isan'ireo nandray anjara tamin'ity fifamatorana masina ity hatramin'ny fanararaotana ity fotoana ity mba hahitàna maso ny Mpanjaka Faha-Efatr'i Bhutan izay tomponandraikitra tamin'ny fampidirana fanovàna demaokratika tao amin'ny fanjakana keliny.
Ilay bilaogera manana ny toerany sady mpaka sary malaza ao Bhutan, Yeshey Dorji dia niraikitra mihitsy teo anoloan'ny fahitalaviny sady nanoratra hoe:
Na dia eo am-panoratana ity lahatsoratra ity aza aho, ny masoko iray kosa dia any amin'ny fahitalavitra BBS hatrany izay mandefa mivantana ny fizotry ny fampakarambadin'ny Mpanjaka mitranga amin'izao fotoana ao Punakha. Lanonana iray mahafinaritra. Ny loko, ny fisehoana ivelany ary ny fandaminana dia fatratra tsotra izao! Nambara tamiko fa fanirian'ny Mpanjaka ny hanao ny fampakarambadiny ho raharaha faran'izay tsotra araka izay tratra. Rehefa nijery ny fahilavitra anefa aho. tsy azoko mihitsy ny haha-raharaha tsotra ny lanonambe tahaka izao – ny loko marevaka miraradraraka, ny fiezinezin'ny lanonanm-pankalazana, ny fombafomba, ny fanakoakon'ny feon'amponga sy ny langoraony ary ny figobogobon'ny angoantendan'ny Dhung sy ny feo mamelovelon'ny Jaling – izy rehetra ireo mitambatra no mahatonga ilay lanonana ho zavatra goavambe. Ary dia tokony ho izany rahateo ilay izy, ity lanonana ity no mitondra mankamin'ny maha-ara-dalàna ny fifamatoran'ny olon-droa amin'ny alalan'ny fanambadiana. Ity hetsika ity no fampidirana ho eo anivon'ny vahoaka ny fandraisam-pahefan'ny Mpanjakavavin'i Bhutan.
Ho an'ireo Bhutanese marobe, ireo fihetsiketsehana ireo dia horaketin'ny tantara ary ho fahatsiarovana niarahana tamin'ny fianakaviana sy ny firenena. Mpampianatra iray antsoina hoe Passang, izay manoratra anaty bilaogy sy manodina ny “Journal of an ordinary Bhutanese” na “Diarinà Bhutanese iray tsotra”, dia niteny hoe:
Na ho impiry hanoratra aza aho androany, tsy hahalaza mihitsy izay tena zava-niseho marina. Nosatrohana satroboninahitra ny Mpanjakavavin'i Bhutan ary nahita ny lanonana avokoa ny olona na dia ireo lavitry ny firenenay aza. Mba hampahazava ny resaka, tiako ny hampakatra azy ity ho anaty lahatsoratra ka rehefa lehibe ny zanako vavy indray andro any dia hamaky sy hahafantatra fa izy koa mba isan'ny nanatrika ilay lanonambe.
Sahala amin'ny hoe amin'ny fotoana firavoravoana toy izao, ny sasany amin'ireo mpitsoa-ponenana nipetraka any ivelany dia nandefa ny firariantsoan-dry zareo tanaty fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra iray an'ny BNS.com (Bhutan News Service) Ny fanehoan-kevitra sasany, na izany aza, dia maneso sy manafintohina. Parangkush Subedi avy any Philadelphia sy Kashi Pokharel dia niteny hoe:
Arahabaina ny Andriamanjaka faha-5 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sy ny Mpanjakavavy Jetsum Pema!
Ary androany dia mbola mitohy ihany ny fankalazana. Raha teny an-dàlana hiverina ho any Thimphu renivohitra ny Mpanjaka mivady, rakotra olona, na antitra na tanora, nivoaka nitandahatra mba hiarahaba ny Mpanjakalahy sy ny Mpanjakavavy vaovao ny lalambe migodana tao Thimphu.
Yeatoeh Penjore, mpianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa, nibitsika hoe :
@Yeatoeh: Mbola tsinjoko ireo olona marobe ery ampàran'ny Norzin Lam miandry mba hiarahaba ny Mpanjakalahy sy ny Mpanjakavavy #Bhutan
Ary Deki Phuntsho, renim-pianakaviana niteraka roa, niteny tao amin'ny Facebook :
Nirotsaka ny haizina ary dia mbola mitandahatra manakaiky ny dzong ihany ny olona hiandry ny mpanjaka mivady, izay nandeha an-tongotra sy niarahaba ny vahoaka nandritra ny andro. Tena ry zareo marina no ‘Mpanjakalahy sy ny Mpanjakavavin'ny vahoaka’
India 17 ora izay